Posted on June 28, 2011 by giriyaad
Warbixin Mu’tamar ka furmay dalka Denmark oo ay ka soo qayb galeen culima badan oo soomaaliya iyo bulshada kalee somaliyeed ee dagan dalka dalmarik
Posted by giriyaadnews on June 26, 2011
Warbixin Mu’tamar ka furmay dalka Denmark
Xuska 26ka June 2011 Oo Boorama Uga Dhacay Si Aan Hore Loo Arag
Video :Xulashada Waxyaabihii giriyaadnews. sii sadaalisay sanad kor maanta oo kale Xulashada Waxyaabihii ay giriyaadnews sii sadaalisay sanad kor maanta oo kale Waanu Ogayn waase lagu galay Djibouti(giriyaadnews)- Bishii June 26 sandkii 2010 giriyaadnews waxay heshay video laga duubay Axmed Silaanyo oo uu dadka inta garaadka leh si dadban ugu sheegayo ajandihiisa qabyaalada ku dhisan ee uu Somaliland la damacsan yahay. Silaanyo wuxuu dadweynaha reer Somaliland u sharxayaa qiimaha ay qablaayadu leedahay isagoo ku tilmaamay inaanan marnaba laga maarmi karin waxaanu yidhi “Waxba yaan been isku sheegin qabyaalada qoloba magac ha u sheegto ee waa qabyaalad waanan ku dhaqanaa. Wariyeha waraysiga ka qaadey ayaa Odayga hoos galisay suaal ahayd adigu hadii aad madaxweyne noqotid dastuurka iyo Qabyaalada sideed iskugu wadi doontaa waxaanu ku jawaabay : Qabyaalu waa waxaanu wax ku qaybsano intaas oo oday ayaa maalin walba ii yimaada qabiil iyagoo wax ku doonaya markaa dastuurku ha inoo joogee maamuusta qabyaalada waa in la dhawraa” Hadaba daawadayaasha qaaliga ah ee giriyaadniws ee waraysigaa aan daawan ayaanu marlabaad fursad u siinay inay ka indhahooda kaga bogtaan ajandaha Oday Silaanyo ee dhinac qabyaalada oo uu sheegay inuu la xabaal galayo inta noloshiisa ka hadhayna uu ku dhaqmayo. Xaalada Silaanyo waxay taagnayd waanu ogayn waase lagu galay markaa Odayga barashaa idiinku laabane calaacalka hala yareeyo hana loo dulqaato
barmaamushkii dakada lughaya iyo siday ugu guulaysteen dad waynaha qurba googa ah ee kasoo kala jeeda gobolada gabilay awdal iyo salal waxay ka gaadheen mashruucaa guul maashaa alaah
asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatahuu walaalo yaasha sharaftalehow mashruuceenii dakada lughaya aan ku dhisaynay hadaan sii jaleeco walaahi waxuu marayaa meel wanaagsan iyo guul waad ogtahiin aduunka inayna ka dhicin qabiil laba habeen oo kaliya ku keena 250,000 oo doolar iyagoona ay cidi gacan qaban wax hayad ahna aan ka helin caawimaad waxay noqotay mid ay umadu wax ku qaataan talabaad waxaa soomalidu inagu xaman jireen gadabuursi wuu karaaye ma yeelo maanta tii way beenawday oo waan karnay waanan yeelay maanta waxay soomaalidu leedahay maxaa sida gadabuursiga inooga bay inaan gacmaha is qabsano oon wax qabsano markaa waxaan u noqonay tusaale wax lagu qaato soomaalidii iyadoo ,arkii horaba laga yaabanaa inagoon dawladi ina caawinin oo dikadna dhaqaale laga helana aanan lahayn ayaan tabaruc iyo xoogeenii ku samaysanay wadooyinkii laamiga ahaa ee boorama iyo kuwii camuud iyo dila iyo boorama isu xidhaayay maashaa alaah waa wax ilaahay loogu shugriyo taasi waxaanan kaashanay aqoontii aduunku inagu xamanayay hadaba walaalo yaal aqoontaa iyo cilmigeenaa aan sidaasi uga faa iidaysano oo aan dalkeena iyo dadkeena wax ugu qabano intaan noolahay wax laynagu xasuusto oo aduunyada dusheeda manaafacaad uleh dadkeena aan galiyo aqoonteena maalkeena muruqeena inshaa alaah sida jaamacadaha wadankeenii caanka kuyahay maanta caafimaadka wadooyinka iyo dakada lughaya oo halbawlahii dalkeena ah aanan ku nasan doono manaafacaadkeeda haduu ilaahay yidhaaho tokeen iyo ubadkeena iyo dalkeena na anfacidoonta kolba dadii inookacda way ka faa iidaysanayaan inamadeena jamacadaha dhameeyay ee meel ay u shaqotagaan waayayna shaqay ka helayaan walaalo yaalhadaba anoo inii soo koobaaya hadalka balanteenu waa dadaal inaahayna ha ina garab qabto walaaloyaal waxaan kaloon idiin sheegayaa inuu wabsayt cusub oo dalkeena inooga soo waramayaa kusoo biiray wabsaydyada madaxa banaan ee laga leeyahay awdal salal iyo gabilay iyo harawo oon kamaqnayn meesha iyaduna gobolkeena ku yaala ismaamulka somalida itoobiya waxaa la yidhaa haa wabsaydka giriyaad.wordpress.com waa wargays madax banaan waxaad warka ugu soo dirikartaan wdawdalstate@gmail.com waxii talo iyo tusaale ah halkaa noogu soo hagaajiya walaaloyaal waa bahda giriyaadnews oo inileh isma dhaafno wabilaahi tawfiiq
waa bahda giriyaadnews oo inileh ismadhaafno wdawdalstate@gmail.com
Jim Traficant Vs Zionist Shill – Fox News
Ardayda Kulliyada Management Science-Ka Ee Jaamacadda Eelo American Oo Ufadhiistay Imtaxaankii Ugu Danbeeyay Ee Qalin Jabinta (Comprehensive Exam)
Ardayda fasalka afraad ee kulliyadda Culuumta maamulka iyo Maaraynta ee Jaamacadda Eelo American ayaa u fadhiistay imtaxaanka dhammaystirka (Comprehensive exam)
ee ay ku qalin jabin doonaan sannadkan gudihiisa. Ardaydan oo ka kooban 58 arday oo iskugu jira 19 gabdhood iyo 39 wiil ayaa waxay dhammaysteen duruustoodii Kulliyada iyadoo imtaxaankan lagu qiimayn doono ardayga mutaysta in la gudoonsiiyo shahaadada iyo ardayda dib ugu noqon doonta imtaxaankan.
Waxaa ardayda la dardaarmay Hormuudka Kulliyadan Prof.Maxammed Olhaye Waabari oo sheegay ujeedada imtaxaanku inuunan ahayn mid ardayda lagu ciqaabayo balse uu yahay mid tayadooda kor u qaadi doona waxa uuna arday kula dardaarmay in ay cilmiga ay barteen ay ku anfacaan dalkooda iyadoo uu dalku ku jiro marxalad u baahan qof walba oo wax wanaagsan ku soo biiriya.
Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Diiwaan haya guud ee jaamacadda isla markaana ah Madaxa Xafiiska imtaanaadka Prof. Hillary Gitua Mathuma oo isaguna u hanbalyeeyay ardayda islamarkaana tilmaamay in uu imtaxaankani yahay kii 90-aad ee ay ardaydu u fadhiistaan muddadii ay daruusta ka qaadanayeen Jaamacadda.
Wasiirada Waxbarashada Oo Booqasho Ku Timid Boorama Iyo Imtixaanaadka Qaranka Oo Ardaydii U Fadhiisteen
M/wayne Siilaanyo Oo Shacbiga Reer S/land Gude Iyo Dibadba Ugu Hambalyeey Xuska Sannad Guurada 51-Aad Ee Xornimadeena 26-June-1960
Madaxweynaha JSL, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud ( Siilaanyo) Isaga oo ku hadlaaya Magaciisa iyo Ka Qaranka Somalilandba waxa uu Hambalyo iyo Boogaadin u dirayaa Dhamaanba Shacbiga Reer Somaliland Meel kasta oo ay joogaanba, Dalka Gudihiisa iyo Debadiisaba, Xuska, Munaasibada Sannad Guurada 51-aad ee ka soo Wareegtay 26-June-1960 oo ah Maalintiii ay Somaliland Madaxbanaanideeda ka qaadatay Mastucmaradii Boqortooyada Ingiriiska Uk.
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu Shacbigiisa reer Somaliland u rajaynayaa inay Sannadkan sannadkiisa ku gaadhaan nabad,guul iyo Barwaaqo, waxaanu ugu baaqayaa in ay dhan uga soo wada jeedaan adkaynta nabad-gelyada iyo qaranimada Somaliland isaga oo ku ammaanaya sida ay markasta heeganka ugu yihiin ilaalinta iyo difaaca Qarannimada Somalialnd.
Oday Dhaqameed Reer Boorama Ah Oo Si Wayn U Taageeray Suldaan Cabdi Sul.Guray Nuur
Qaadhaan-Ururinta Dekedda Lughaya Oo Si Habsami Ah Usocota Iyo Jaaliyadaha Reer Adal Oo Ku Tartamaya Ka Qaybqaadashada Mashruucan
Lug -Mashruuca dhismaha dekedda Lughaya ayaa si habsi ah u socda, iyada oo ay illaa imika soo xareetay lacag fara badani, dadwaynaha reer Adal-na si nafhuridleh uga qayb qaateen taabba gelintiisa
lana filayo inuu mashruucaasi si buuxda u hirgeli doono sannadkan gudihiisa.
Ururka horumarinta deegaannada Adal (ARDAA) ayaa dhisamaha dekaddan dhagaxa dhigay 20kii bishii November ee sannadkii 2010kii. Xafladdii dhagax dhigga oo ka dhacday magaalada Lughaya waxa ka soo qaybgalay wafdi ka socday ururka Ardaa, masuuliyiin ka tirsan gobolka Awdal, xildhibaanno ka mid ah golaha wakiillada Somali Land, aqoon yahan iyo madaxdhaqmeedyo.
Dhismaha dekeddan ayaa lagu wadaa inuu qayb libaax ka qaadan doono kor u qaadista dulahaanba dhaqaalaha Somali Land gaarahaanna gobollada galbeedka oo aan iyagu lahayn ilo dhaqaale oo horumarsan, waxa kale oo aad looga dareemay daafaha dunida sida ay dadwaynaha ka soo jeeda Awdal, Salal, Gabilay iyo Harawo ugu heellanyihiin gacan ka gaysashada mashruucan taariikhiga ah.
Ururka ARDAA meelo kala duwan ayuu shirar ku qabtay tan iyo maalintii uu soo baxay hindisaha dekeddu, dhammaan jaaliyaduhuna meel kasta oo ay joogaanba si aan kala hadh lahayn ayay ugu riyaaqaan uguna qayb qaataan qaadhaan bixinta, maxaayeelay waxa ay aaminsanyihiin in dekedda Lughaya tahay waa` cusub oo u baryay dalkooda iyo dadkoodaba, islamarkaana ay waajib tahay in ruux walba ka qayb qaato tallaabadan wax ku oolka ah.
Todobaadkii hore 19kii bishan June, mar uu wafdi ka socoday ururka Ardaa oo ka koobnaa guddoomiye Ibraahim Cabsiiye, Xaaji Maxamad Xuseen Fariid iyo Sheekh Maxamad Xuseen Hadi, booqaday dalka Britain ayaa magaalooyinka London iyo Birmingham si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay.
Ugu horrayn waxa ay la kulmeen jaaliyadda deggan magaalada London oo si laga yaabay isugu soo baxday ugana qayb qaatay mashruucii dekedda ee uu wafdigu u socday, waxana la moodayay inay dadwaynuhu sugiba kari la`aayeen wafdiga iyo mashruucan wadaniga ah ee ay u socdeen.
Xafladdii London waxa ka hadlay xubnaha wafdiga ARDAA oo si faahfaahsan u sharraxay qiimaha iyo qaayaha mashruucan, sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay dadkana ka qiiraysiiyay Xildhibaan Cali Obsiiye Diidiriye (Cali Gabilay) oo dadwaynaha isku yimid uga warramay sida loo tartamayo dalkii Somali Land gudihiisa looguna tartamayo horumar iyo waxqabad ee ay jaaliyad walba deegaannadeeda u dhisayso una horumarinayso.
Sidoo kale waxaa xafladdaasi ka hadashay xildhibaan Ikraan Xaaaj Daawuud oo iyana ka warrantay qiimaha maschruucan iyo sida ay waajib u tahay in la isaga kaashado hirgelintiisa.
Sidoo kale wafdigu kulan noocan oo kale ah ayuu ku qabtay Birmingham oo ah magaalada labaad ee dalka Britain, wuxuuna kala kulmay jawi la mid ah midkii London.
Waxyaabaha lagaga yaabay jaaliyadda reer England waxa ka mid ah inay labo maalmood oo kaliya ku ururiyeen lacag kor u dhaaftay 230 kun oo dollar. Arrintaasina waxa ay ka marag kacday sida ay jaaliyadda reer Britain ugu xidhanyihiin dalkooda, diyaarna u yihiin markasta inay ka qayb qaataan hormarka gudaha.
Sidoo kale magaalada Ottawa ee dalka Canada ee fadhiga u ah ururka ARDAA ayaa waxa todobaad kasta lagu qabtaa kulan lagu lafagurayo habsamisocodka qaadhaan ururinta, iyo maaraynta Mashruucan dekedda Lughaya, waxana halkaasi la isku waydaarsadaa fikradaha iyo talooyinka iyo waliba sida ugu habboon ee ay qurbajoogtu isaga kaashan karaan taabbo-gelinta mashruucan wadaniga ah.
Dhinac kale dadwaynaha ku nool dalkii hooyo gudihiisa ayaa iyaguna u heellan inay mar uun helaan dekad ay iyagu leeyihiin oo kor u qaadda dhaqaalahooda iyo jiritaankooda bulsho ahaaneed, waxana la sheegayaa inay dhammaan dadwaynaha ku sugan guduhu diyaar u yihiin ka qaybqaadashada dhismaha dekeddaan.